Lapho usana eba neminyaka izinyanga 6-7, imikhiqizo emisha kufanele kuvele ekudleni kwakhe. Kulokhu ungakwazi ukondla imvuthu, noma inhlanganisela ubisi lwebele isikhathi eside. Omunye izitsha athandwa kakhulu izingane iyona isobho. Yilokho ngakho futhi Kuzoxoxwa. Uzofunda indlela ukupheka isobho ngomntwana unyaka. Ungadliwa uzobe kuchaziwe ngezansi. Futhi uzothola izici kulungiselelwa lokhu dish.
Isobho ngomntwana: Highlights
Lokhu dish is busuka ekudleni komntwana akuyona ngaphambi kokuba afinyelele izinyanga eziyisithupha. Kulokhu, zonke izingxenye kufanele vele imvuthu ajwayelekile. Kungenjalo, ukusabela iguliswa, futhi awazi ku onjani izingxenye singenzeka.
Ngaphambi ukupheka ingane isobho, ukuhlola ngokucophelela izinga lemikhiqizo akhethiwe. Amazambane kanye izaqathe kufanele kube fresh, kodwa broccoli nokholifulawa kufanele bakhethe eqandisiwe.
Izinhlobo isobho izingane ezincane
Isobho ngomntwana unyaka (zokupheka uzobona ngezansi) Kungase kudingeke elisekela eziningana. ethandwa kakhulu yilezi ezilandelayo:
Akubalulekile ngalesi yobudala ukunikeza imvuthu ukudla uketshezi abandayo ezifana utamatisi, u-garlic kanye noshizi isobho, kanye okroshka.
Indlela ukupheka isobho for kid?
Ngakho, usuthathe isinqumo lokwenza imvuthu ngoba ukudla okumnandi nokunomsoco. Ukuze uqale nge abasebenzi. Njengoba wazi, zonke izithako kumele izinga okusezingeni eliphezulu. Ungakhethi imifino Lokudabuka ezingabazisayo. Inketho enhle ukusebenzisa imikhiqizo esekhulile ngezandla zabo.
Uma ungeza inyama, isobho kufanele iphekwe unogwaja, inkukhu, turkey noma inyama yenkonyana. Ungalokothi usebenzise i-leli wundlu ubudala, ingulube. Gwema umhluzi ecebile, okuyinto uzilungiselele usebenzisa amathambo. Kungaba ngcono uma uthatha umhluzi yesibili. Ngakho, indlela ukupheka isobho ngomntwana kuze kube unyaka? Ungadliwa ethulwa ukunakwa kwakho.
Vegetable isobho ingaqukatha zonke imifino ukuthi ingane yakho uthanda. Noma kunjalo, kufanele kube ajwayelekile nengane. Njengoba yenziwe izitsha ngokusekelwe yemifino umhluzi. amazambane Oku-ahlanzekile okudingekayo futhi cwilisa ngamanzi abandayo. Lokhu zokukhwabanisa kusiza ukuqeda isitashi. Uma umkhiqizo abasha, kungenzeka ukugwema le nqubo.
Fake nquma amazambane, u-anyanisi, izaqathe. Thumela kubo ngamanzi abandayo kanye gqoka umlilo. Lapho ketshezi amathumba, ayifake zucchini precleaned, broccoli, cauliflower. Ukwakheka kungase kushintshwe ngendlela esilindele yakho. Uma ingane inenkinga ngesitulo, bese ufaka u-beetroot ogayiwe nemifino. Bilisa imifino kuze kuphekwe (imizuzu lengu-20). Khona-ke ukususa isitsha ekushiseni futhi ususe imikhiqizo kusukela umhluzi.
Vegetable isobho ibhalwe ngosizo blender. Lapho indlu has a umntwana, le ekhaya Imishini kuyoba owusizo. Beka zonke izithako endishini kanye Chop. Engeza lemali edingekayo yemifino umhluzi kanye amathisipuni ambalwa amafutha omnqumo. Ngokuphelele uhlanganise ukwakheka kanye esiqandisini. Khona ungaqala ukondla.
Uma ingane yakho ine kakade izinyanga ezingu-9, ekudleni kwakhe kufanele iqukathe inyama. I isobho kuqala nale isithako kufanele kube yemifino ezisekelwe. Lokhu kusho ukuthi kudingeka alungiselele umkhiqizo ngokuvumelana iresiphi ngenhla, kodwa blender kudingeka nibeke amaqatha ambalwa inyama asanda ngaphandle isikhumba namafutha.
Uma pipsqueak sengqondo esihle kule isidlo, kungenzeka ehlukahlukene futhi ukupheka isobho for a umhluzi ecebile. Ukuze wenze lokhu, thatha inyama ngaphandle amathambo ukupheka. Ngemva kwalokho, sokukhipha ketshezi kuqala, bese uphinda inqubo. umhluzi Okwesibili lingaphansi amanoni kangcono ozotholwa esiswini zezingane. Ngemva ekuwulungiseleleni, asuse inyama futhi upheka amaveji njengoba kuchaziwe ngenhla. In a blender uhlanganise wonke bese wengeza lemali edingekayo umhluzi lelungiselelwe. Ngo umkhiqizo elinjalo, awukwazi ukwengeza inyama, njengoba kunjalo ngaphandle lokhu kugcina ngokugqamile.
Ukupheka inhlanzi isobho ngoba ingane kuhilela ukusetshenziswa izidalwa inyama ulwandle. Le nhlanzi has amathambo encane cishe awekho, futhi ewusizo kakhulu imvuthuluka.
Hlanza inyama kusukela amathambo ukugeza. Beka epanini gqoka umlilo. Bilisa izinhlanzi kufanele kube amaminithi angu-30. Ungakhohlwa ususe Foam njalo. Lapho umkhiqizo usulungile, ubeke amazambane lisikiwe futhi izaqathi. Pheka imizuzu 5. Eceleni isobho, ungakwazi ukwengeza noma iyiphi iqolo. Lokhu kungaba nokunye okufana nokolweni, irayisi, ibhali noma yini ingane yakho uthanda. Khumbula ukuthi irayisi isobho uyakwazi ukuqinisa amathumbu. Akumele isetshenziselwe ukuqunjelwa. Lapho ibhali usulungile (mayelana 10 imizuzu), ubeke amahlumela ngesikele sokuthena ambalwa dill isidlo futhi ake ume for isigamu sehora. Ngemva kwalokho, ngosizo imikhiqizo blender Mash ungaqala ukusuthisa imvuthu.
Indlela ukupheka isobho kusukela ingane amaphakethe?
Okwamanje, abakhiqizi ukudla ingane ukunikela ukuthenga hhayi kuphela iphalishi encibilikayo nobisi, kodwa futhi isobho. Ukuze silungiselele lokhu dish wena umane alulaze ngayo amanzi ashisayo. Khumbula ukuthi udinga ukukhetha umkhiqizo ngokuhambisana yobudala ingane. Kulokhu, kuba njalo akukhetha ukudla okuphekwe ekhaya.
Isobho we amaphakethe kuyinto elula ukuthatha nawe ohambeni, lapho ungeke sima isitofu bese usebenzisa blender.
Efingqa isiphelo sesimiso sihloko, noma encane
Ngakho, manje nikwazi ukupheka isobho ngomntwana unyaka. Ungadliwa izitsha ethandwa futhi unempilo abalwe ngenhla. Khetha eyodwa nefinyelela imvuthu yakho, futhi ukupheka. Nokho, ukudla okufanele nhlobonhlobo. Ngezikhathi ukushintsha amasha nezindlela ezintsha zokulungiselela isobho. ukudla Liquid kufanele babekhona ekudleni komntwana kusuka izinyanga 7-8. Le mikhiqizo ukusiza ipheshana wokugaya ukudla. I isobho aqukethe imifino okune-fibre yemisipha indawo.
Okuphakelayo ingane yakho ukudla okumnandi, ewusizo nokunomsoco. Wayedinga ke ekukhuleni evamile nokuthuthuka. Impumelelo isobho!
Izingane ezivela imishado ehlukene: nifundiswa nesimo esinzima kangaka?
Yini okufanele ukwazi ingane iminyaka 5 futhi ukuthi kubalulekile ukufundisa kwakhe yini?
Tuxedo imaski - indlela ukudweba ke?
Umunwe linikeza izingane ezingaphansi konyaka owodwa: uzama ukudweba
Sihalalisela ema-umfana ngosuku lwakhe lokuzalwa (iminyaka 8) - njengoba kufanele kube
Ekaterinburg amathilomu: uhlu lwamakheli, izibuyekezo, izilinganiso
Dalatsin gel - incazelo izidakamizwa
Ukuqunjelwa: izimbangela, izimpawu kanye nokwelashwa. Izifo wokugaya ukudla
Umtholampilo "Yiba okunempilo" ku Sukharev: ukwelashwa, odokotela, amanani kanye nokubuyekezwa
Norman Walker ngokuvumelana nemvelo
Kwekhanda ngezandla zakho siqu
Indlela ukungena yisiyezi: indlela ethandwa kakhulu